Fuzhou မိုးလုံလေလုံ reception ည့်ခံ FM၊ MW၊ SW အကဲဖြတ်ချက်တွင် DTS-10, 1103,1106, PL-310၊ CZH / Fmuser FM Transmitter China Supplier ဆက်သွယ်ရန် - lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
နေအိမ် » Fuzhou မိုးလုံလေလုံ reception ည့်ခံ FM၊ MW၊ SW အကဲဖြတ်ချက်များတွင် DTS-10, 1103,1106, PL-310
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင်ဒေသခံသုံးစွဲသူများသည် DTS-1 sq ကိုဘက်ထရီနှင့်နာရီဝက်ကစားခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ငါ့ကိုဖြတ်သွားပါလိမ့်မည်။ PL-10 သည် FM, MW နှင့်ရရှိသောကွန်ပျူတာကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၁၀၃,၁၁၀၆ ၌ရှိလိမ့်မည်။ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုတားဆီးနိုင်ခြင်း၊ DTS-1103,1106 ရှိ 310FM အတွက်ကန ဦး ထင်မြင်ချက်ကိုရရှိခြင်း၊ အကြမ်းအားဖြင့်တူညီသောမဂ္ဂါဝပ်၊ DTS-1103 ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုစွမ်းရည်နှင့်အထွေထွေ 10၊ 10, PL-1103 နှင့်လေယာဉ်နှစ်စင်းတို့မပါဝင်ပါ။ လှပသောအသံတစ်ဘုံခံစားမှု။ Sq သည် Chengxing မှညနေ ၁၅း၀၀ နာရီမှလည်းကောင်း၊ ၁၁၀၃၁၁၀၆၊ PL-1106 - by - point နှိုင်းယှဉ်ကြိမ်နှုန်း FM ရေဒီယိုလက်ခံခြင်းသည်အဆုံးမွန်းလွဲ ၂၂း၃၀ အထိထားခဲ့ပါသည်။ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်ညနေ ၂း၃၀ အထိစတုတ္ထမြောက်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် MW နှင့် SW reception ည့်ခံခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုဖြင့် (SW frequency-by-point နှိုင်းယှဉ်မှုမရှိပါ) ။ ထို့ကြောင့် 310th နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီတွင်စက်ဖြတ်သွားရာမှသုံးလိုင်းနှိုင်းယှဉ်မှုအဆုံးသတ်သွားသည်။ DTS-10 ၏ကန ဦး ခံစားချက်များအပေါ်အောက်ပါပထမ ဦး ဆုံးဟောပြောချက်:
DTS-10 ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းထက်ကျော်လွန်သောအရွယ်အစားကိုရရှိပြီးနောက်၊ သေးငယ်သည့်ကက်ဆက်အရွယ်အစား၊ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၊ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဖော်ပြရန်အလွန်ကြီးမားနိုင်သည်၊ အစိုင်အခဲခံစားမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးချောမွေ့။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ LCD မျက်နှာပြင်သည်ကြိမ်နှုန်း၊ အချက်ပြစွမ်းအား၊ တစ်ခုတည်းသောနှင့်နှစ်ဆရုပ်သံလိုင်း၊ ကျယ်ပြန့်သော band၊ အပူချိန်စသည်တို့အပါအ ၀ င် ၀ င်းဒိုးပြသမှုများစွာလည်းရှိသည်။ ခလုတ်တစ်ခုသည်စနစ်တကျလည်ပတ်နေသည့်နေရာများ၊ ssb တွင်တပ်ဆင်ထားသောအမြင့်နှင့်အနိမ့်တန်ချိန်များအသီးသီးရှိသည်။ အတွေးအခေါ်သစ်များဖြင့်အပူချိန်ဖော်ပြခြင်း၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောလွှဲခွင်ထိန်းချုပ်မှု; အသံတိတ်ခလုတ်တစ်ခုနှင့်တယ်လီဖုန်း၏အဆင်ပြေမှုကိုအချိန်မီဖွင့်နိုင်ခြင်း၊ အသံအတိုးအကျယ်ဖုကိုလှည့်ခြင်းကကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားရသည်။ နောက်ခံအလင်း၊ ညတွင်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အထူးသဖြင့်ညအချိန်တွင်မီးခလုတ်များသည်ယူနစ်များကိုရှာရန်မည်းရ။
ဒါပေမယ့်အားနည်းချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးစမ်းသပ်မှုတွေရှိတယ်။ တိုးတက်မှုရဖို့အတွက် anjan စတစ်ကာတွေကပုံပျက်နေတဲ့ပုံသဏ္seriouslyာန်ကိုအလေးအနက်မထားဘူးလို့ပြောသင့်တယ်။ ဒုတိယစစ်ဆင်ရေးမှာ Shuttle ၏ဘီးတွင်းသည် ICOM-R71E လက်ချောင်းများဖြစ်သော Anzhuo အလှည့်ချိန်ညှိခြင်းကိုထိုင်ဝမ်ကဲ့သို့မပေးနိူင်ပါ။ တတိယအချက်မှာ panel နှင့်ကျဉ်းမြောင်းသော -band dial dial ဘူး၏အကျယ်သည်အချိန်တွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ“ clicks” ခံစားချက်; နောက်ဆုံးတွင်သုံးရက်လုံးအတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အပြင်၌ဖြစ်စေအပူချိန်ဖော်ပြမှုသည် ၁၆-၁၈ ဒီဂရီဖြစ်သည်။ မတူညီတဲ့ backlit LCD screen, right-left-light light, ပိုပြီးပေါ့ပါးတဲ့ LCD display တွေရှိတယ်။ အသံချဲ့စက်ပိတ်ထားသောအခန်းများကိုလှောင်အိမ်အတွင်း၌တွေ့မြင်နိုင်သည်။ AC ပါဝါထောက်ပံ့ရေး, ဆူညံသံကိုအလွန်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ တိုးတက်မှုအတွက်နေရာပို
လက်ခံရရှိမှုထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ssb လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်သိပ်မရင်းနှီးသောကြောင့်၊ ကျွန်တော့်ကိုလှိုင်းတံပိုးရှည်တဲ့ signal မပေးနိူင်တဲ့အတွက်နှိုင်းယှဉ် FM၊ MW, SW သာတစ်ခုပဲ။ ပထမ ၁ ရက်မှစ၍ ၁၁၀၃,၁၁၁၀၆၊ PL-1၊ PL-1103,1106 လေးလုံးစက် (ယူနစ်ဖြင့်) ဖြင့်အတူတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြည်နယ်နှင့် PL-310 လွှတ်တင်သည့်နေ့သည်အဘယ်သူမျှမအစောပိုင်းကတည်းကဖြစ်သည်။
DTS-10, 1103,1106, PL-310 ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန်
【ရည်ရွယ်ချက်, FM, MW, SW band အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန် DTS-10, 1103,1106, PL-310 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက
【နည်းလမ်း - နားထောင်ခြင်းပတ် ၀ န်းကျင် - FM နှိုင်းယှဉ်ယူနစ် (၁၅) ထပ်ပါတတိယထပ်တွင်၊ မြောက်အခန်းပြတင်းပေါက်များ
MW, SW သည် ၁၀ ထပ်တိုက်၊ ၃ ထပ်၊ မြောက်အခန်းပြတင်းပေါက်များနှင့်ခြားနားသည်
၁.၁၁၀၃ FM ဆက်သွယ်မှုလေးမျိုးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲဖြစ်သင့်သည်။ 1.1103, PL-1106 အသစ်ဝယ်ယူထက်ဝက်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်ရန် DTS-310 ဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
၂။ လေယာဉ်လေးစင်းဆွဲထုတ်သောအခါနှင်တံအင်တင်နာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်အရှည်ဆုံးသောပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ငါလေဒီအင်တာနာကိုအကောင်းဆုံးအချိန်အတိုင်းအတာကိုခံယူဖို့ထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
၃။ FM ၏လက်ရှိအခြေအနေများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားစက်တစ်ခုချင်းစီပေါ်တွင်နေရာချခြင်း၊ MW နှင့် SW တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကမှားယွင်းသောအချိန်ဖွင့်ထားခြင်း၊ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန်နှင့်၊ စက်တစ်လုံးစီတွင်တစ်ခုစီသည် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်စက်တစ်လုံးစီသည် boot ကိုခွင့်ပြုသည်။
【ရလဒ်များ】 ၁၊ FM တီးဝိုင်း
87.5-108.0MHz နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၈၇.၅ MHz မှ 0.5MHz ကြားကာလကို 87.5 MHz အောက်ရှိ radio frequency ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန်နှိုင်းယှဉ်မှုမရှိပါ။ ထိုင်ဝမ်သည်တူညီသောအားနည်းချက်ကိုအရှိဆုံးတိကျသောရလဒ်များကိုအကြိမ်ကြိမ်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်
၁. ပထမ ဦး စွာပထမအချက်အနေဖြင့်ဒေသတွင်းဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ၈၇.၆ MHz၊ ၈၈.၃ MHz၊ ၈၉.၃ MHz၊ ၉၀.၆ MHz၊ ၉၁.၃ MHz၊ ၉၂.၅ MHz၊ ၉၄.၄ MHz၊ ၉၆.၁ MHz၊ 1 MHz၊ 87.6 MHz၊ 88.3 MHz DTS-89.3 ၏အသံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစက်လေးလုံးကိုကောင်းစွာလက်ခံပြီးဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ပရဒိသုပျံကဲ့သို့တေးဂီတတွင်နှစ်မြှုပ်ထားသောမမြင်ရသောတောင်ပံများကိုကြားရန်ဖြစ်သည်။ မတော်တဆထိခိုက်မှုမတိုင်မီရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုင်ဝမ် ၈၈.၃ MHz၊ အချက်ပြမှုအလွန်ပြင်းထန်သည်။ လေယာဉ်လေးစင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးအကြောင်းအရာနှင့် ၉၈.၇ MHz, လေယာဉ်လေးစင်းလက်ခံရရှိသည်။
၂။ Non-DTS-2 ဘူတာ၏ကြိမ်နှုန်းများစွာတွင်တွေ့ရသောရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ထိုင်ဝမ်သို့ထွက်ခွာသွားသည့်ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောဒေသတွင်း 10MHz အမြန်နှုန်းရှိသည်။ အသံသည်အလွန်သေးငယ်။ အသံပမာဏကိုထိန်းညှိရန်လိုအပ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ 98.7 သည်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များမဟုတ်ပါ၊ 1103, PL-1106 တွင်ဤဖြစ်ရပ်မှန်ရှိသော်လည်းကြိမ်နှုန်းနည်းသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၁၀၀.၁၀ MHz၊ ၁၀၁.၅ MH၊ ၁၀၁.၇ MHz၊ ၁၀.၃ MHz အချက်ပြထိုင်ဝမ် ၄ ခုတွင်အားနည်းနေသည်။ Taichung, Taiwan ICRT ၏ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် 310 MHz; 100.10 ဘယ်မှာထုတ်လွှင့်မယ်ဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ၉၈.၇ နဲ့လေယာဉ်လေးစင်းကိုအတူတူပါ ၀ င်တဲ့လေယာဉ်လေးစင်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်၊ ၁၀၁.၇၀ MHz ဖူဂျီနင်းဒီရေဒီယိုအသံ၊ အင်တာနက်အနည်းငယ်ရှာဖွေပါ၊ လိပ်စာ: ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်၊ ပင်း Tong ကီယူအသွားအလာ Ningde Tacitus လမ်း၊ ၁၁၃.၂ ကီလိုမီတာ၊ ကောင်းကင်မှ ၇၇ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိ၊ Baidu ရှာဖွေရေး“ Ningde People's Radio” ကျွန်တော့်ရဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာစတစ်ကာတွေရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုတွေ့ရတဲ့စာမျက်နှာ၊ ဆက်သွယ်မှုကိုဖွင့်ပါ။ Putian's Traffic Radio အတွက် ၁၀၃.၀၀ MHz၊ မြေပြင်အခြေစိုက်အကွာအဝေး ၁၁၄.၅ ကီလိုမီတာ၊
စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ ၁၀၁.၅ MH လက်ခံရရှိစဉ် antenna 101.50 DTS-1106 antenna ကိုအမှတ်တမဲ့ထိမိလိုက်သည်၊ ရုတ်တရက် 10 ၏အသံသည်အသံတိုး။ ကျယ်လာပြီး DTS-1106 slide ထဲတွင် 1106 antenna antenna ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အသံအနိမ့်အမြင့်သည်ရုတ်တရက်အလွန်ကျယ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးအလွန်အားကောင်းသောအချက်ပြခြင်း၊ စတီရီယိုစနစ်ကိုဖျက်စီးခြင်း၊ ဆူညံသံအနည်းငယ်မရခြင်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်မှုများစွာသည်အခြားစက်သုံးခုသည်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များမဟုတ်သော်လည်းဤနည်းလမ်းများဖြင့် ၁၀၁.၅ MH ရရှိသည်နှင့်အတူ 10 စက်ယန္တရားများ၊ သို့သော် ၁၀၀.၁၀ MHz၊ ၁၀၁.၇၀ MHz၊ ၁၀၃.၀၀ MHz အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်မထင်ရှားပါ။ အချက်ပြမီးသည်အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်း၏အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောလက်ခံသူဖြစ်လာနိုင်သည်။
531-1710KHz မှစ၍ 9KHz manual search radio station နှင့်အားနည်းသောယူနစ်များနှင့်အလွန်ကွာခြားမှုရှိသည့် အချိန်မှစ၍ ထပ်မံနားထောင်ခြင်းသည် DTS-10 သည်ကျဉ်းမြောင်းသောအကျယ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ခဲ့ပြီး AM Control နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုချိန်ညှိခဲ့သည်။
ခိုင်ခံ့သောဒေသခံဘူတာရုံ - ၅၄၀ KHz၊ ၅၈၅ KHz၊ ၆၀၃ KHz၊ ၆၆၆ KHz၊ 540 KHz, 585 KHz, 603 KHz, 666 KHz, 720 KHz, 801 KHz စက်လေးခုသည်ယခုအချိန်တွင်လွယ်လွယ်ကူကူကိုင်တွယ်နိုင်သော်လည်း DTS-882 မှ AM ထိန်းချုပ်မှုကစားသည် 1332/1404 အမြင့်နှင့်အနိမ့်အမြင့်တွင် broadband တွင်ကစားရန်အမြင့်ဆုံး bandwidth နှင့်နီးကပ်ရန်၊ FM နားထောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအခါနားထောင်ခြင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။
ပိုလန်နိမ့်နိမ့်၌ ၆၄၈ KHz ဂွမ်ဒေါင်းရေဒီယို၊ ၇၂၉ KHz Jiangxi သတင်းလွှင့်ချက်များ၊ ၇၄၄ KHz နှင့်ဟူဘူပြည်သူ့ရေဒီယိုတွင် 648 ကိုလက်ခံနိုင်သည်၊ သို့သော် DTS-729 နှင့် 774 အသံမြည်။ အားကောင်းသောအချက်ပြ DTS-4 အသံအရည်အသွေးသည် နောက်ခံဆူညံသံနိမ့်သည်, အတန်းပျော်မွေ့နီးပါးကိုနားထောင်; 10 နောက်ခံဆူညံသံပိုမိုရှင်းလင်းသောနားထောင်ခြင်း, ပို။ ပင်။ 1103, PL-10 သော်လည်းရေဒီယိုကိုလက်ခံရရှိသော်လည်းအထူးသဖြင့် 1103 ဆူညံသံသည်အလွန်ကြီးသောဆူညံသံအလွန် Naiting သည်မခံရပ်နိုင်ပါ။
ကြိမ်နှုန်းအလယ်အလတ် - ၁၁၁၆ KHz ဗဟိုပြည်သူ့ရေဒီယိုတရုတ်အသံ (ထိုင်ဝမ်က) ပိုလန်နိမ့်နိမ့်ဒေသမှနားထောင်ခြင်းအခြေအနေသည်အခြားအားနည်းသောထိုင်ဝမ်ထိုင်ဝမ်အားစာရင်းမကောက်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆုံးသတ် - 1494KHz အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ဂီတကိုထုတ်လွှင့်သည်။ 1503KHz အရှေ့တောင်အာရှ၏ဘာသာစကားကိုပြောဆိုသော, နားမလည်ခဲ့ 1530 သည် Hangzhou ရှိ Zhejiang's City ရှိရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်းမြေအကွာအဝေး ၆၈၇.၈ ကီလိုမီတာ၊ ၄၇၀.၆ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအကွာအဝေး။ ယူနစ် (၃) ခုနှင့်အထက်နှင့်မတူဘဲ (၁၁၀၃) သည်ကောင်းသော၊ ကြည်လင်သောနှင့်ကြားနိုင်သည့်အသံကိုနားထောင်ရန်နောက်ခံဆူညံသံသည်လည်းကြီးမားသည်။ DTS-687.8 သည်အချက်ပြစွမ်းအား၊ ဆူညံသံ၊ ၁၁၀၃ ထက်သေးငယ်သော်လည်း၊ သေတာ၊ ဆူညံသံနည်းတာကအသံအနည်းငယ်ကိုရှာလို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့် AM470.6 ကိုသူမြည်တော့မယ်။ ဂျာမန်ကျောင်းသားတွေထူထောင်၊ ခလုပ်အလှည့်၊ ဆဲလ် ၁-၂ ကိုရောက်ဖို့အချက်ပြမှုနှင့်နောက်ဆုံးတော့အသံ။
1106, PL-310 အမှု, သည်ကွားနိုင်သော signal ကိုခွန်အား, signal ကိုအားနည်းနေသည်, အနိမ့်အသံအနည်းငယ်သာကြားသိ, fuzzy မှတ်မိ 1106, PL-310 Sheung Wan ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းလည်းအများကြီးပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
နံနက် ၁း၁၀ နာရီညတွင်နားထောင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ TOSHIBA ၏ RP-1F သည်ထပ်တူကြိမ်နှုန်းအတိုင်းပင်ထပ်မံထုတ်ပေးလိမ့်မည်၊ အချို့သောဘူတာများမှာလေထဲမှထွက်သွားပြီဖြစ်သည်၊ 10 ယူနစ်နှင့် 770 ညီမျှခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းအသံ ၁၁၀၃ ထက်အနည်းငယ်နည်းပါးသောဆူညံသံကဂျပန်လူမျိုးများသည်အမှန်ပင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
Lamb, စင်ကြယ်သော AM ကားတစ်စီးသည်ပြိုင်ပွဲမှလေယာဉ်ပျက်သွားသည်။ SANYO ၏ F7100A၊ စွမ်းအင်အတွက်ဘက်ထရီ၊ သံလိုက်ဘားအင်တင်နာဘက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဓိကကွိုင်၊ တူညီသောကြိမ်နှုန်းအတိုင်းပင်အသံကြည်လင်သောအသံနှင့်အလယ်အလတ်ဆူညံသံကိုထပ်မံရရှိလိမ့်မည်။ ကောင်းတယ် အချက်အပြင်။
၃ ။ Shortwave reception ည့်ခံ
အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသဖြင့် ၄ နာရီနံနက်တွင်တစ်နာရီ ၂:၃၀ နာရီအထိတိုတောင်းသောလှိုင်းခွင်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးနောက်သုံးစွဲခဲ့သည်။ တိုတောင်းသောလှိုင်းတိုရေဒီယိုတွင်နိမ့်နိမ့်စက်လေးလုံးကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ၄ င်းတို့ကိုနားထောင်ရန်၊ စက်လေးလုံးလက်ခံရန် B2 Mandarin ၏ Time and Frequency List (အောက်တိုဘာ ၂၆ တွင်အသစ်ပြောင်းခြင်း) မှပင်မအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေဒီယိုမှရိုးရိုးလျှပ်စစ်သံလိုက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်။ မရရှိပါသလားလက်ခံရရှိခြင်းမဟုတ်ပါ၊ စာရင်းမသွင်းရသေးသော်လည်းကွဲပြားသောစက်လေးလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည် DTS-30 နောက်ခံဆူညံသံသည်နိမ့်ကျပါသည်။ အသံအရည်အသွေးသည် Naiting 4, PL-09 ဆူညံသံထက်ကောင်းမွန်ပါသည်။
ကြားနိုင်သည့်အဆင့်အတွက်ထိုင်ဝမ်၊ ၅၈၄၀KHz၊ ၅၉၂၅ KHz 5840 အထိအားနည်းနေသောကြောင့် DTS-5925 သည်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်၊ ကြားနိုင်သည်ပင်၊ 1103, PL-10 သည်အနံ့နီးပါးရှိသည်။ 1106 KHz, 310 KHz 9530, PL-9605 အသံသည်အလွန်သေးငယ်။ ဆူညံသံအထူးသဖြင့်ချွန်ထက်။ ပြင်းထန်သောဆူညံသံများ၏ 1106 အသံသည်မခံရပ်နိုင်ပါ။
၁။ FM Listen: DTS-1 ≈ 10> PL1103 ≥ 310, သို့သော် DTS-1106 ထက်အနည်းငယ်သာလွန်သောသာလွန်ထူးကဲမှု၏ထူးခြားမှုကို 1103 အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ရှေ့တွင်ရှိသော DTS-10 ၏အသံအရည်အသွေးကိုနားထောင်ခြင်း၊ အခြေခံအားဖြင့် 10. PL1103 နှင့် 310 နှင့်အနည်းငယ်လည်ပတ်နေစဉ်လည်ချောင်းကိုနားဆင်ပါ၊ သို့သော် DSP ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အတော်အတန်ကောင်းမွန်သည်။
၂။ MW နားထောင်ခြင်း - ၁၁၀၃ ≈ DTS-2> 1103 ≈ PL10, 1106 သည်ပိုလန် high-end သေးငယ်သော်လည်းအလွန်ကောင်းသော DTS-310 ဆူညံသံနှင့်နောက်ကျောတွင်အသံအရည်အသွေးကောင်းခဲ့ပြီးအခြေခံအားဖြင့် 1103. PL10 နှင့် 1103 သည်အနည်းငယ်ယုတ်ညံ့သည်၊ 310 သည် PL1106 တွင်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းလာသော်လည်းအသံသံ၊ ဆူညံသံ၊ အပြည့်အဝထိတွေ့မှုရှိသော်လည်း၎င်းသည် PL1106 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နီးပါးရှိသည်။
(၃) Shortwave နားထောင်ခြင်း - အချိန်အခက်အခဲကြောင့်၊ ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုစီကိုနှိုင်းယှဉ်တိုင်း 3KHz မဟုတ်သောကြောင့်ရလဒ်မှာ 5> DTS-1103> PL10 ≈ 310, သို့သော် DTS-1106 သည်နားထောင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ 10 အလွန်အကျွံဆူညံသံအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလွန်းကြမ်းတမ်းသောအချက်ပြ၏ဆူညံသံအတွက်ရေနစ်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် DTS-10 သည်မြင့်မားသော sensitivity နှင့်အသံလှပသောစက်ဖြစ်သည်။ 1103 သည်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမကြာမီကစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသည်။ PL310 သည်စက်ကောင်းကောင်းတစ်လုံး ဖြစ်၍ စျေးနှုန်းနိမ့်၊ သေးငယ်။ အိတ်ဆောင်ဖြစ်သော်လည်းဆူညံသံနှင့်ဆူညံသံများကိုတဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ 1106 သည်အထွof်အထိပ်သို့ရောက်သော်လည်းသို့သော်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုသည်ကွင်းဆက်တွင်မည်သည့်အရာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသနည်း၊ ထိပ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများသည်ဂီတရေဒီယိုစက်ကိုပေးအပ်ရန်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ (အကဲဖြတ်မှုသည်ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လက်ယက်လုပ်ခြင်းကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ဤပုံစံအားလုံးသည်ဆိုလိုသည်မဟုတ်)